Xaqiiji in daaqadaha cusubi ay caawimaan, aan waxyeello lahayn, tallaabooyinkan ka hortagga ah
Aynu marka hore soo bandhigno dhammaan waxyaabahan soo socda: cusbooneysiinta ay bixiso Microsoft ayaa marar dhif ah sababaysa dhibaatooyin . Tani waxaa ka mid ah kuwa lagu riixo Patch Talaado iyo kuwa kale oo loo dooran karo Windows Update .
Waxaan dhahay naadir , marnaba maahan . Weydii qofkasta oo leh guri ka buuxa kombiyuutar aan shaqaynayn maalinta ka dambaysa Patch Talaadada, waxaadna ku dhaaran doontaa in Microsoft si ula kac ah u khaldan kombuyuutarrada dunida ee ku shaqeeya Windows. Mar labaad, dhibaatooyinka ma dhacaan inta badan oo marar dhif ah, laakiin marka ay sameeyaan way dhibsadaan.
Nasiib wanaag, waxaa jira waxyaabo aad u fudud oo aad sameyn kartid si aad u yareyso fursadda ah in qalab ka mid ah Microsoft uu waxyeello ka badan karo:
Talo: Haddii ay tahay goor dambe oo waxyeellada la qabtay, eeg sida loo xaliyo Dhibaatooyinka ay keentay Windows Updates for help.
Tallaabooyin ka hortag ah hal mar
Tan ugu muhiimsana, hubso in xogtaada muhiimka ah lagu soo celiyo ! Markaad kombiyutarku ku burburo, iyadoon loo eegin sababta, waxaad u maleyneysaa in aad leedahay dareen xoogan oo dareen xoog leh oo lafdhabar u ah laftiisa, laakiin waxaan ku qanacsanahay inaad ka welwelsan tahay waxyaabaha aad ku kaydisay.
Waxaa jira siyaabo badan oo lagu soo celinayo xogta, laga bilaabo gacantaada nuqul dukumiintiga badbaadsan, muusikada, fiidiyoowga, iwm. Fursad kale ayaa ah inaad isticmaasho qalab xafiis oo bilaash ah .
Iyadoo aan loo eegin sida aad u sameyso, samee . Haddii habka kaliya ee aad uga baxdo nidaamkii Patch-Talaadada ee Patch-Talaado waa nadiif nadiif ah ee Windows ah , waxaad noqon doontaa mid aad u faraxsan, in macluumaadkaaga qiimaha leh uu ammaan yahay.
Bedelista goobaha Windows Update si aad u hesho boombal cusub si toos ah loo rakibin. Inta badan Windows-ka, tani macnaheedu waa bedelidda goobtan si aad u cusbooneysiiso cusboonaysiinta, laakiin aan u oggolaado in aan ku rakibno .
Iyadoo Windows Update loo habeeyay habkan, amniga muhiimka ah iyo wixii cusbooneysiin ah ayaa weli la soo dejiyey, laakiin ma lagu rakibin doono haddii aadan si cad u sheegin Windows si loo soo dajiyo. Tani waa hal mar isbedel , sidaas darteed haddii aad tan hore u sameysay, weyn. Haddii kale, samee hadda.
Muhiim: Waxaan wali kugula talineynaa in aad rakibtid dhamaan wixii cusbooneysiin ah. Si kastaba ha noqotee, habkan waxaad ku jirtaa xakameyn buuxda, ma aha Microsoft.
Ka hubi meesha bannaan ee ugu weyn ee kuugu adag oo aad u hubso in ay ugu yaraan 20% wadarta guud ee darawalka. Qadarkaasi waa mid aad u badan Windows iyo barnaamijyada kale si ay u koraan sida ugu muhimsan, gaar ahaan xilliyada habeynta iyo soo kabashada.
Gaar ahaan, System Restore , oo ah geedi socodka raysashada ee asaasiga ah haddii cusbooneysiinta Windows ay keento dhibaato wayn, ma abuuri karto dhibcooyin dib u soo celin haddii aysan jirin meel ku filan oo ku filan oo kuugu jirta dariiqa adag.
Ka hor inta aan la cusbooneysiin cusbooneysiinta
Hadda oo aad ku habboontahay habka aad u cusbooneysiineysid oo aad si fiican u hubiso in System Restore ay tahay in la helo nidaam shaqo haddii aad ubaahan tahay waqti dambe, waxaad dhab ahaantii heli kartaa kuwan cusub oo lagu rakibay:
Ku rakib kombiyutarkaaga haddii aysan hore u jirin. Isticmaalayaasha macaamiisha ayaa mar hore la daboolay laakiin laptop, kumbuyuutar , iyo qalabka kale ee mobile waa in had iyo jeer lagu xiraa inta lagu jiro nidaamka cusbooneysiinta Windows!
Laga soo bilaabo khadadka isku midka ah, iska ilaali inaad cusbooneysiiso cusbooneysiinta Windows inta lagu jiro duufaanka, duufaanka, iyo xaaladaha kale ee keeni kara in si deg-deg ah lumo!
Maxay arrintaani tahay? Haddii batterigaaga uu hoos u dhaco inta lagu jiro habka casriyeynta ama kombiyuutarkaaga uu lumiyo awood, waxaa jira fursad weyn oo uu u jajabinayo faylasha la cusbooneysiiyo. Faylasha muhiimka ah ee musuqmaasuqa badanaa waxay keenaan wax aad isku dayeyso inaad ka hortagto halkan - burbur buuxa.
Ku bilaw kombuyuutarkaaga . U hubso inaad si sax ah u sameyso, adigoo isticmaalaya qalabka dib u bilawga ah ee gudaha Windows, ka dibna hubi in kombuyuutarku mar labaad si guul leh u bilaabi karo.
Maxay tahay inaad dib u bilowdo? Kombiyuutarka qaar ka mid ah, marka Windows dib loo soo celiyo ka dib markii la cusbooneysiiyo amniga Talaado Talaadada, waa markii kowaad ee kombuyuutarka la bilaabo bil ama in ka badan . Arimo badan ayaa marka hore la arko kadib markii la bilaabay, sida dhibaatooyin ay keeneen noocyada qaar ka mid ah nadaafadaha , dhibaatooyinka qaarkood ee hardware , iwm.
Haddii kumbuyuutarku uusan si fiican u bilaabin, arag sida loo xalliyo Kombiyuutarka oo aan ku noqon doonin caawimo. Haddii aadan dib u bilaabin oo aad heshay dhibaatadan hadda, waxaad isku dayi lahayd inaad xalliso arinta sida Windows Update / Patch Talaado ka dib halkii arin aan toos ahayn oo run ahaantii ah.
Abuur celcelis gaar ah gacanta ka hor inta aanad cusbooneysiin cusub. Goob-soo-celin ayaa si toos ah loo abuuray Windows Update ka hor inta aan lagu rakibin waxkasta oo aad dooratid laakiin haddii aad jeclaan lahayd lakab kale oo dheeraad ah, waxaad hubaal ka dhigan kartaa naftaada.
Haddii aad runtii jeclaan lahayd in la diyaariyo, waxaad xitaa isku dayi kartaa inaad dib ugu soo celiso naftaada gacanta lagu soo celiyo. Tani waxay caddaynaysaa in nidaamka Dib u-celinta nidaamku si fiican u shaqaynayo Windows. Nasiib darro, dadka isticmaala qaarkood waxay ogaadaan in Nidaamka System Restore uu si uun u jabsaday marka ay u baahdaan inta badan.
Si ku-meel-gaadh ah u jooji barnaamijkaaga antivirus. Joojinta barnaamijka antivirus ee aad ku rakibayso barnaamijka ayaa badanaa kaa caawin kara ka hortagga dhibaatooyinka rakibida. Iyada oo ku saleysan waaya-aragnimadayada, iyo kuwa ka mid ah akhristayaasha badan, sameynta isku mid ah ka hor inta cusboonaysiinta Windows sidoo kale waa caqli.
Talo: Qayb ka mid ah barnaamijka antivirus ee aad rabto in la jebiyo waa qaybta had iyo jeer ku saabsan, si joogto ah u daawashada dhaqdhaqaaqa waxyeellada ee kombuyuutarka. Tani waxaa badanaa lagu magacaabaa sida ilaalinta waqtiga dhabta ah ee barnaamijka, gaardiyeyaasha rasmiga ah , auto- protection , iwm.
Ku rakib Dayactirada hal mar Waqti
Hadda oo aad si habboon u rakibtay kombuyuutarka aadna u diyaarisay wixii cusbooneysiin ah, waa waqtigii aad ku heli lahayd nidaamka rakibidda dhabta ah.
Sida cinwaanka soo jeedin, cusbooneysii cusbooneysi kasta , laftiisa dib u cusbooneysi kadib markii mid waliba la isticmaalo.
Inkastoo aan ognahay inay taasi noqon karto waqti-qaadasho, habkani waxa uu ka hortagay arrin kasta oo Arbacada Talaado ah oo aan waligay ku tijaabinay.
Talo: Haddii aad dareento gaar ahaan geesinimo, ama waligeed dhib ku qabin updates cusub ee Windows, isku day inaad ku rakibto wada-qabashada wadaag ahaan koox ahaan, wax kale oo aan ku guuleysanay. Tusaale ahaan, rakibi updates .NET of version ah gaar ah, dhammaan hababka nidaamka hawlgalka nidaamka hawlgalka, iwm.
Digniin: Waxaa laga yaabaa inaad u baahatid inaad joojiso barnaamijka barnaamijka antivirus ee waqtiga-dhabta ah mar kasta Windows khaanadaha kadib mar dambe dib u-rakibidda-dib-u-bilaabinta maaddaama qaar ka mid ah barnaamijyada AV ay ilaalinayaan oo kaliya ilaa dib u bilaabid. Sidoo kale, hubso in aad hubiso in barnaamijkaaga antivirus si buuxda u-suurto galiyey markii aad dhammaystireysid cusbooneysiinta.
Dayactirka World World 2018
Sida Loo Dhigayo Kumbuyuutarkaaga iyo Scanner
Sida Loo Sheego Haddii Kaarkaagu uu Shaqeynayo
Calaamadaha Xirfadaha Guud
6 -da ugu wanaagsan ee Wi-Fi-ga ee Wi-Fi-ga ah ee la iibsado 2018
8 Qoraallada ugu fiican ee lagu iibsado sannadka 2018
Sida loo Nadiifiyo Farriimaha La tirtiro si Gaar ah Muuqaalka
Beddelida Raadiyaha Classic Classic
Waa maxay Ogeysiiska Riixka? Sideen u isticmaalaa?
Horudhaca Shabakadaha Kombuyuutarada Ganacsiga
Sida Loo eego Qodobada Bogga
Kala Qaybinta Laba Laba Laba Shaqood ee Shaqada Muuqaalka Dheer
Waa maxay sababta aad iPhone Icons u ruxayso iyo sida loo Joojiyo
Adobe InDesign Xulashada, Nooca, Qalabka Calaamadaynta
Qorshaha Natiijada Weyn / Madadaasha Jimcaha waa la soo bandhigay
Sidee loo dhajin karaa Farsamooyinka Farsamada IFIP ee Excel
Kuwa ugu wanaagsan iPhone Game Developers
Sida loo abuuro jaantuska Gantt ee Google Calaamadaha
Dhammaan Ku Saabsan Kaararka, Qalabka Google-Faa'iidada La'aanta
Waa maxay Samsung Siyaabaha Caymiska ah?
Sidee ayaan kuugu dhejin karaa nambarka codka kor ku xusan Calaamadda Copyright in Text?